Tsy fandriampahalemana: Basy 20 sy bala 200 mahery no sarona teto AntananarivoLa dépêche de Madagascar
La dépêche de MadagascarFiainam-pirenena MALAGASYTsy fandriampahalemana: Basy 20 sy bala 200 mahery no sarona teto Antananarivo	Tsy fandriampahalemana: Basy 20 sy bala 200 mahery no sarona teto Antananarivo	12/01/2017	Rédigé par:	Hanitra RAKOTOBE
Laisser un commentaire	Ampahany tamin’ireo fitaovam-piadiana mahery vaika sarona teto Antananarivo renivohitra	Categorie:	Fiainam-pirenena, MALAGASY	Hyperlien
Hanitra RAKOTOBE Basy 20 sy bala maherin’ny 200 no tra-tehaka teto Antananarivo ny taona 2016. Tsy latsaky ny 730 ny trangana vaky trano, raha miisa 401 kosa ny fanafihana mitam-piadiana. Efa nisy ny fepetra noraisina
_Miseho lany ny tsy fandriam-pahalemana eto Antananarivo renivohitra. Raha ny taona 2016 no asiana teny dia, basy 20 sy bala tsy latsaka ny 200 isa no saron’ny mpitandro ny filaminana. Fantatra io nandritra ny valan-dresaka ho an’ny mpanao gazety nataon’ny kaomisera Tsaramonina Ravony Jean Victor, commissaire central. Basy mahery vaika toy ny “Kalachnikov” ary basy vita gasy ireto sarona ireto. Manoloana izany dia, nisy ny fepetra hentitra noraisin’ny tompon’andraikitry ny filaminana. “Tsy miandry hetsika manokana ny polisim-pirenena vao mandray andraikitra, efa misy ireo polisy miparitaka manao fisafoana na eny an-dàlambe na any anaty elakelan-trano. Ao ireo misahana ny fifamoivoizana, ary ao ihany koa ireo izay misava ny antotan-taratasin’ny fiara sy ny moto. Tsy handefitra manoloana ny tsy fanarahan-dalàna ny mpitandro ny filaminana. Porofon’izany ny fanasaziana ireo mpitondra moto izay tsy manao aroloha na tsy manana taratasy ara-dalàna”, hoy ny fanazavana azo avy amin’ity kaomisera tompon’andraikitra ao Tsaralalàna ity.
Nahitam-bokany sahady ny hetsika izay natao. Raha ny fantatra hatrany dia, ravan’ny mpitandro ny filaminana nanomboka ny sabotsy teo ny andian-jiolahy mpikambana ao anatin’ny “Bande des 7”. Dimy no azo sambo-belona ary iray no maty voatifitry ny polisy tamin’ireo jiolahy ireo, izay efa mpamerin-keloka ny ankabeazany. Misy amin’ireo jiolahy ireo no efa nisazy 10 taona, saingy vantany vao mivoaka ny fonja dia miditra indray anatin’ny fikambanan-jiolahy, hoy hatrany ny fanazavana azo.
Raha ho an’ny taona lasa iny hatrany dia, vaky trano 730 no nisy teto Antananarivo renivohitra izay narahina fanafihana mitam-piadiana miisa 401. Raha aravona dia, fanafihana mitam-piadiana tsy latsaka ny iray isan’andro ary vaky trano roa isan’andro no nitranga raha kely. Manjaka ny tsy fandriampahalemana, efa manao ny ainy tsy ho zavatra anefa ny fitondram-panjakana mba hamongorana izany, na ny eto an-drenivohitra na ny any amin’ny faritra amin’ny alalan’ireo paikady maro izay najoro.
Partager la publication "Tsy fandriampahalemana: Basy 20 sy bala 200 mahery no sarona teto Antananarivo"